Mialoha fifidianana ao Mozambika, niadian-kevitra ny “vaovao faikany” sy ny loza aterany · Global Voices teny Malagasy
Nifantoka tamin'ny loza ateraky ny vaovao faikany ny adihevitra.
Voadika ny 28 Aogositra 2019 5:02 GMT
Natao tao Maputo ny fihaonambe momba ny “tambajotra sosialy, vaovao faikany, fanodikodinam-baovao ary ny fiarovana an-tserasera manodidina ny tontolon'ny fifidianana demokratika”. Saripikan'i Dércio Tsandzana, 5 Aogositra 2019, nahazoana alalana.
Ny Alatsinainy 5 Aogositra, notaterahina tao Maputo ny fihaonambe mitondra ny lohateny hoe “tambajotra sosialy, vaovao diso, fanodikodinam-baovao ary ny fiarovana an-tserasera manodidina ny tontolon'ny fifidianana demaokratika izay nokarakarain'ny ivontoerana mikarakara ny fifidianana ho an'ny demaokrasia lovain-jafy any Mozambika (EISA) .
Nanatrika ny fihaonambe ny Global Voices, izay niresahan'ny toniam-paritra avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina miteny Paortiogey, Dércio Tsandzana, ny lohahevitra noho ny fanatonan'ny fifidianana amin'ny 15 Oktobra 2019.
Noezahan'ny EISA ny nampivory ireo mpisehatra nasionaly sy iraisampirenena ao amin'ny sehatry ny fifidianana noho ny filàna iresahana io finiavana hanaparitaka fandisoam-baovao sy vaovao diso mandritra ny fifidianana io.
Nisy ireo manampahaizana manokana momba ny zon'olombelona, ny ​​serasera, ny fahalalahana an-gazety sy ny fiarovana an-tserasera avy any Afrika Atsimo, ary teo ihany koa ny mpikaroka Mozambikana miasa amin'ny sehatry ny serasera sosialy.
Fihaonambe tao Maputo momba ny “tambajotra sosialy, vaovao faikany, fanodikodinam-baovao ary ny fiarovana an-tserasera manodidina ny tontolon'ny fifidianana demokratika”. Saripikan'i Dércio Tsandzana, 5 Aogositra 2019, nahazoana alalana.
Nilaza i Ericino de Salema, filoha talen'ny EISA Mozambika fa mamorona tontolo mampiroborobo ny herisetra sy ny fanalam-baraka atao amin'ny olon-kafa ny fandisoam-baovao.
Mety hamorona kandida tsy misy ary hanova ihany koa ny hafatra ampitain'ny kandidà tena izy mandritra ny fifidianana ny vaovao diso hoy i Olufunto Akinduro, Talen'ny Sampan-draharaha mikarakara ny Fifidianana sy ny Dingana Ara-pôlitika any Afrika (EISA).
Fake News any Mozambika: adihevitra saro-kenatra
Nandritra ny kaoferansa, hita mazava fa tsy zava-baovao ny famoahana vaovao tsy marina sy ny fanodikodinam-baovao mandritra ny fifidianana. Na izany aza anefa, tsy dia misy resaka firy momba izany any Mozambika, indrindra moa fa tsy dia misy ny marimaritra iraisana momba ny famaritana izany ao Mozambika. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny 18% -n'ny mponina ao amin'ny firenena monja no afaka miditra amin'ny Aterineto.
Ohatra, tsy nisy afa-tsy roa monja ny hetsika nifandraika tamin'ilay lohahevitra tato anatin'ny taona vitsivitsy, tamin'ny volana Mey 2018 ny iray ary tamin'ny volana Jolay 2019 ny iray hafa. Nokarakarain'ny Vaomiera Episkôpaly ho an'ny rariny sy ny fandriampahalemana (“Vaovao diso sy Asa Fanoratan-gazetin'ny Fandriampahalemana” ) ny voalohany, ary nokarakarain'ny Lusa Moçambique (“Fake News – olana demaokratika”) ny faharoa.
Ankoatra izany, nasongadina ihany koa ny famoaham-baovao tamin'ny 2 May tamin'ity taona ity izay mitondra ny lohateny hoe: ” Fake News: manova ny olana sasany amin'ny lisi-pifidianana ny Renamo,” izay navoakan'ny tatitra momba ny fifidianana avy ao amin'ny Ivontoeram-bahoaka ho an'ny Fahamendrehana (CIP).
Nanadihady lalina ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notontosain'ny Fifaharam-pirenen'i Mozambika (Renamo) tamin'ny 24 Aprily momba ny lisi-pifidianana ny CIP ary nanasongadina ny fifanoheran-kevitra tamin'ny vaovao nomen'izy ireo.
Ho an'ny fifidianana amin'ny volana Oktobra dia hisy ny fanaraha-maso bebe kokoa momba ny vaovao mivezivezy, ho an'ny daholobe na dia tsy misy aza ny sehatra manokana natokana ho an'izany. Tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2014, nampiasa rafitra virtoaly mba hanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana ny fikambanana sivily antsoina hoe Txeka -mijery sy mandinika amin'ny teny paortiogey.